४ दशकपछि तोडियो रेकर्डः च्याम्पियन लिगको उपाधि रियल मड्रिडलाई | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
जेठ १३ गते, २०७५ - ०७:०८
युरोपियन च्याम्पियन लिगको उपाधि स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडले जितेको छ । शनिबार राति भएको उपाधि भिडन्तमा इंग्लिस क्लब लिभरपुललाई ३-१ ले पराजित गर्दै रियल मड्रिड लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन लिगको उपाधि जित्न सफल भएको हो ।
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएकोमा ५१ औं मिनेटमा बेञ्जिमाको गोलबाट रियल मड्रिडले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो । ५५ औं मिनेटमा लिभरपुलका लागि साडिओ मेनेले गोल गरी खेल बराबरीमा पुर्‍याए । त्यसपछि ६१ औं मिनेटमा मैदान छिरेका बेलले ६४ औं मिनेटमा गोल गरी पुन टोलीलाई अग्रता दिलाए। बेलले नै ८३ मिनेटमा अर्को गोल गरेपछि रियल मड्रिड सहज जित हात पार्न सफल भयो ।
रियल सन १९७५–७६ को सिजनपछि लगातार तीन पटक उपाधि जित्ने टोली बन्न पुगेको छ । त्यस समय जर्मन क्लब वार्यन मुनिखले लगातार तीन पटक उपाधि जितेको थियो । यो रियलको च्याम्पियन लिगको १३ औं उपाधि हो । च्याम्पियन लिगमा सबैभन्दा बढी उपाधि जित्ने टोली पनि रियल मड्रिड नै हो ।
जेठ १३ गते, २०७५ - ०७:०८ मा प्रकाशित
एकतामा पेलिए समानान्तर कमिटी बनाउँछु– नेपाल
प्रचण्ड नहुँदा के हुन्छ एकता ? के भएको छ सहमति ?
प्रतिवन्धित नेकपालाई सरकारले चिन्दैन –ओली
सिताले नमानेपछि अन्तत पत्निको उपचारका लागी अमेरिका जाँदै प्रचण्ड
राति ‘हेडफोन’ लगाएर सुतेका विद्यार्थी विहान उठ्दा कान नसुन्ने भएपछि…
विप्लवलाई विश्वासमा लिन काँग्रेसको आग्रह
सामाजिक सुरक्षा योजनाः रोजगारदाताको सहभागिता निराशाजनक